Uyibhala njani inoveli: unyango lwexesha | Uncwadi lwangoku
El unyango lwexeshana Yenye yezinto ekufuneka siyikhathalele ukuze iziphumo zomsebenzi wethu obalisayo ziyanelise.
Kukho izinto ezahlukeneyo ezinxulumene nexesha que kufuneka sithathele ingqalelo.
Kuqala kufuneka sicace malunga Ixesha apho sibeka khona ibali lethu kwaye siqhuba amaxwebhu angqongqo malunga nalo ukunqanda ubukho bezinto ezingalunganga, ezinokonakalisa ukuthembeka komsebenzi wethu.
Okwesibini, kufuneka sicace malunga Ixesha iinyani, oko kukuthi, uluhlu lwexeshana oluqulathe iinoveli zethu, ukusuka ekuqaleni kwayo ukuya esiphelweni sayo. Kukho iinoveli apho yonke into yenzeka ngeyure ezimbalwa, ngelixa ezinye zihlala iinyanga, iminyaka, ubomi bonke bomlinganiswa, okanye iinkulungwane okanye amawaka eminyaka. Kuxhomekeke kubude bexesha lethu, kuyakufuneka senze iinkqubo ezingaphezulu okanye ezimbalwa ezinje nge-ellipsis, izishwankathelo okanye izikhulisi, esiza kuchaza apha ngezantsi.
Isingqisho somsebenzi ikwayinto enxulumene nenqwelomoya yethutyana. Kwezinye izicatshulwa siya kuba nomdla kwisantya esikhawulezayo ngelixa kwezinye singakhetha ukuba kube kokonwaba ngakumbi kwaye nomxholo. Ngale nto sinokudlala ngezixhobo ezinje:
IsishwankatheloIxesha elide lithunyelwa kwimigca embalwa enomxholo ongadibaniyo kwaphela nempikiswano. Yandisa isantya sokubaliswa kwakho.
UbumeIxesha elithile lishiyiwe ngokungqalileyo ngenxa yokuba lingadibani okanye ngenxa yezizathu zokuyilwa kuyacetyiswa ukuba ungazivezi ulwazi oluthile kwinqanaba elithile ebalini. Yandisa isantya sokubalisa kwakho.
Ukwandiswa: Kuqukethe ukulibaziseka xa kubaliswa isiganeko, umzekelo xa sinikezela imihlathi eliqela ekubaliseni into eyenzekileyo ngexesha elifutshane (imizuzwana, imizuzu, njl.). Ukunikezela isahluko sonke kumlo wexesha elide okanye imihlathi eliqela kwingozi engadluli kwimizuzwana elishumi iya kuba yimizekelo yenkqubo ecothisa isantya senoveli.
Ukuphuma: Ziyacothisa isantya senoveli. Banxulunyaniswa nengqwalaselo eyenziwe ngumbalisi ophambukayo kumxholo ophambili.
Enye into ekufuneka siyithathele ingqalelo yile indlela esichaza ngayo iinyani. Onke amabali anexesha elinengqiqo, esinokuthi silitshintshe ngokukhetha ukuba yeyiphi inyani ekufuneka iveliswe kuqala ukufezekisa isiphumo esithile kubafundi bethu (iyelenqe, ukothuka, njl.). Ukulungiselela le nto, kufanelekile ukuba ubenakho ukuqonda iikhonsepthi ze-analepsis (ukuphazamisa ixesha elibalisayo ukubalisa ngeziganeko zangaphambili) kunye neprolepsis (ukuphazamisa ixesha elibalisayo ukubalisa ngeziganeko ezizayo).
Okokugqibela, kufanelekile ukuba uthathele ingqalelo ukuba ixesha liyatshintsha kuwo wonke umsebenzi kwaye kuyakufuneka ukwazi ukuba ungaluveza njani olu tshintsho ngendlela umfundi aluqonda ngokwendalo. Inkqubo ye- iinkcazo Banokuba sisixhobo esihle sokuphawula utshintsho ukusuka emini kuye ebusuku, utshintsho lwexesha lonyaka okanye notshintsho lonyaka, ngakumbi ukuba sizimisele ukwenza ukutsiba okungaguqukiyo ukusuka kwindawo enye ukuya kwelinye ukuya kulo lonke ibali ngaphandle intloko kuye nakubani na ocinga ukulandela intambo yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Indlela yokubhala inoveli: unyango lwexesha